Warshadda Shiishashka ah ee Shiishashka Ares80 iyo iibgeeyayaasha Shiinaha | Kinzon
Nidaamka gla glay system
Balakoonka Frame glazing
Nidaamka bidhaaminta balakoonka oo aan dhammays tirnayn
Nidaamka glazing Terrace
Glame terrace glazing
Glazing terrace glame
Daaqadda kiimikada Aluminium
Daaqadda kiisaska alloy
Daaqada kiimikada aluminium ee kuleylka ah ee alwaax
Daaqadda aluminiyamka daloolka iyo dib u soo celinta
Daaqada Alidiyam alwaax
Daaqadda Aluminiyamka lagu jiido
Alloy slide window
Daaqada alwaax kuleylka kuleylka leh ee daaqada
Aluminium kiiska dacwada
Alloy case case case
Kiiska kuleylka aluminium
Albaabada laalaabka Aluminium
Alloy laabida albaabka
Aluminium aluminium jabsiga albaabka laabista
Al aluminium albaabka isku shaandheynta
Alloy albaabo is jiidasho leh
Aluminium farxadda leh ee alwaaxdu gooyso
Balakoonka Barafka Nidaamka Kinzon06
Balakoonka daaqada Kinzon50
Balakoonka Barafka Nidaamka Kinzon09
Suuqa Qiimaha jaban ee Ares80
Slide window-Ares80 wuxuu caan ku yahay buuxinta shuruudaha banaanka qolka jiifka. Sida daaqad furiin fudud, ma aha oo kaliya bixinta casriga, laakiin waxay sidoo kale bixisaa hawo badan. Daaqadahaan si caqli ku dhisan loo dhisay ayaa furmaya ayadoon la isticmaalin wax bannaanka ah ama banaanka. Adigoo u oggolaanaya slide-Ares80 in lagu xiro laba door oo furan, furayaal hawo hawo ayaa sidoo kale la heli karaa.
Suuqa kala iibsiga ee jaban - Ares80
Goobta asal ahaan
Shanghai, Shiinaha (Mainland)
Quraarad labalaab ah
Kubbad kubbadda qaadidda
Laba koob oo istaaji
Adag ee track profile
Degganaan iyo waqti dheer
Laba ama saddex track
Slide window-Ares80 wuxuu caan ku yahay buuxinta shuruudaha banaanka qolka jiifka. Sida daaqad furiin fudud, ma aha oo kaliya bixinta casriga, laakiin waxay sidoo kale bixisaa hawo badan. Daaqadahaan si caqli ku dhisan loo dhisay ayaa furmaya ayadoon la isticmaalin wax bannaanka ah ama banaanka. Adigoo u oggolaanaya slide-Ares80 in lagu xiro laba door oo furan, furayaal hawo hawo ayaa sidoo kale la heli karaa. Dadku way heli karaan daaqadan-Ares80 si ay ugu oggolaadaan iftiinka iyo hawo soo galaan gurigooda sidoo kale waxay dhameystiraan dhex-dhexaadintooda.
Meel xidhan, Ares oo daaqaysa aluminium daaqadaha leh oo leh shukumaanno caadi ah ayaa bixinaya yareynta dhawaqa in ka badan 50 dB, taasoo ah wax ku ool ah kala-goynta dariiqa waddada. dhisme leh Ares slide aluminium daaqadeed ayaa gaari kara celcelis ahaan 15% kaydinta tamarta.
Daaqada aluminium ee Finzone ayaa la dejiyay waxayna gudubtay culeyska dabaysha, culeyska dhibcaha iyo tijaabooyinka saameynta. Astaamaha aluminiumka iyo qaababka dariiqa iyo furitaanka ee daaqadda aluminiinka ee Finzone waxay ka samaysan yihiin qalabka cimilada-cimilo-caddeynta ah. Daaqada aluminiyida ee Finzone waxay leedahay 10 sano damaanad wax soo saar. Daaqada aluminium ee Finzone waxay la jaan qaadeysaa shuruudaha CE ee adag ee loo qoondeeyay / PSB ee Singapore / Gost ee Russia.
Xirmada & Dhoofinta
Hore: Alloy Slindow Window Ares80-1
Xiga: Aluminium Up Down dariisa Daaqada Ares83
Hoos u Dhaji Window Ares85
Aluminium Up Down dariishadda Daaqadda Ares85
Aluminium Up Down dariisa Daaqada Ares83
Alloy Slindow Window Ares80-1
Balakoonka muraayadaha muraayadaha Ares80-1
Qalabka Kala-baxa Daaqadda Ares83